[APK] အကောင်းဆုံး NES emulator နှင့်ဒဏ္legာရီဂိမ်းများ | Androidsis
Francisco Ruiz | | APK, Android application များ, စိတ်ကြွဆေး, Android ဂိမ်းများ
ရှည်လျားသောတနင်္ဂနွေပြီးနောက်ငါမှမည်သည့်အကြောင်းအရာများကို upload တင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ Androidsis ဗီဒီယိုလိုင်းယနေ့၊ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသည့်လျှောက်လွှာကဲ့သို့သောထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုကိုလူအများစုကစဉ်းစားသော application တစ်ခုယူဆောင်လာခဲ့ရသည် Android အတွက်အကောင်းဆုံး NES emulator.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော NES emulator နှင့်အခြား apk ဖိုင်ကိုမျှဝေခြင်းအပြင်အရာသည်ထိုတွင်ရပ်တန့်မသွားပါ nintendo DS emulator Android အတွက်ဒီ post မှာတွေ့ရတဲ့ ZIP ဖိုင်ထဲမှာလည်းသင်တွေ့လိမ့်မယ် ခုနစျပါးဂန္နှင့်ဒဏ္Nာရီ NES ဂိမ်း။ ဒါအပြင် .nes format နဲ့မဆိုဂိမ်းကစားနိုင်ပါ Nintendo NES အတွက် Roms မှဝေမျှထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
ငါပြောသော application သည်ရိုးရှင်းစွာခေါ်ဆိုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည် NES ငါတို့ရှိသည် ဒီတူညီတဲ့ link ကနေတိုက်ရိုက် download လုပ်ပါ အဲဒါကို Google Play စတိုးမှာမရနိုင်လို့ပဲ ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် malware အခမဲ့ application တစ်ခု အဖြစ် ငါကိုယ်တိုင် virustotal တွင်ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့ပြီး 0/0 ၏ရလဒ်ကိုပေးခဲ့သည်။
ဤလိုင်းများအထက်တွင်ကျွန်ုပ်ကျန်ခဲ့သော link အပြင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု၊ Telegram မှာရှိတဲ့ Androidsis အုပ်စုထဲဝင်ပြီးသူ့ကိုရှာပါ, un ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသူ ၂၄၀၀ နီးပါးရှိသော chat group နေ့စဉ်နေ့တိုင်း application များ၊ ဗဟုသုတများကိုဝေမျှပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကူညီသည်။ အုပ်စုထဲမှာဒီ apk ပေါင်းဂိမ်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ဂိမ်းခုနစ်မျိုးကိုသင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအရာအလုံးစုံကို compressed zip ဖိုင်တွင်.
သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် apk နှင့်ဂိမ်းများကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
compress လုပ်ထားသောဖိုင်ကို ZIP format ဖြင့် download လုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင်၎င်းသည်မည်သည့် file explorer နှင့်မဆို decompress လုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးလိမ့်မည် လျှောက်လွှာတပ်ဆင်မှုအတွက် apk ဖိုင် နှင့်ဂန္ NES ဂိမ်းခုနစ်ခုပါ ၀ င်သောဖိုင်တွဲတစ်ခု။
အားလုံး၏ပထမ ဦး ဆုံးသွားရလိမ့်မည် Android settings နှင့် Security option တွင်အမည်မသိအရင်းအမြစ်များသို့မဟုတ်မသိသောမူလရင်းမြစ်များကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် NES apk ကိုနှိပ်ပြီး application ၏ installation ကိုလက်ခံနိုင်သည်။
လျှောက်လွှာကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏လျှောက်လွှာအံဆွဲထဲ၌ပေါ်လာမည့်အိုင်ကွန်နှင့်ပေါ်လာသည့်ပထမ ဦး ဆုံးမြင်ကွင်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကို run နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ zip ကို unzipped လုပ်ထားသောလမ်းကြောင်းသို့သွားပါ။ သင် NES အတွက်ဂိမ်းဖိုလ်ဒါကိုတွေ့လိမ့်မည်.
အောက်ပါလင့်ခ်တွင်သင်လုပ်နိုင်သည် NES ဂိမ်းများကို download လုပ်ပါ အခမဲ့
လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော်သင်ပါ ၀ င်ပြီးသင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိပါကပို့စ်အစတွင်ကျွန်ုပ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည့်ပူးတွဲပါဗီဒီယိုတွင်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဖော်ပြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဂိမ်းကစားနည်း Android မှ NES.
Android အတွက် NES pack မှာ NES apk အပါအ ၀ င်၊ ဂိမ်း ၇ ခုလည်းပါဝင်သည်။
စူပါမာရီယို Bros 2
စူပါမာရီယို Bros 3
ငါသည်သင်တို့ကိုပြသမယ့်ဗီဒီယို post ကိုပြင်ဆင်နေနေစဉ် Androidsisvideo ရုပ်သံလိုင်းနှင့် Androidsis ဘလော့ဂ်ကိုညှိနေပါ Android အတွက်အကောင်းဆုံး NES emulator နှင့်လိုက်ဖက်သောဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာ။ အိုးနှင့်ဒီအရာအားလုံးသည်လုံးဝအခမဲ့၊ လုံခြုံပြီးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးတည်းမှဖြစ်သည် !!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » [APK] အကောင်းဆုံး NES emulator နှင့်ဒဏ္legာရီဂိမ်း ၇ ခု
၎င်းသည်အရာအားလုံးနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ပေါ်လွင်စေသောဆိုးသွမ်းမှုအားလုံးသည်သနားစရာကောင်းသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့်ခလုတ်ခုံအဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဒါဟာ chonis များအတွက်ဖြတ်မပေးပါ
ငါအခမဲ့ nes ​​အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် nes ဂိမ်းအများစုနှင့်အက်ပီဖိုင်၏ရှုပ်ထွေးမှုများစွာမရှိဘဲကူးယူခဲ့သည်
Nicolas Torres ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း၊ အရမ်းကောင်းတဲ့ကောင်ပဲ! ချီလီကနေကြိုဆိုပါတယ်။
Nicolás Torres ကိုပြန်ပြောပါ
Moto Z2 Force နှင့် ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု